Rage PUBG Hack ats Cheats, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Rage PUBG likaHack yilelo elaligqokwe
I-Rage PUBG Cheat yethu ifana nanoma iyiphi enye, yingakho abasebenzisi basathembele kuyo ukuze ibagcine phezulu kumdlalo wabo.
Thola ukufinyelela ku-PUBG Rage Hack yethu emangalisayo usebenzisa ukhiye womkhiqizo wosuku olungu-1
Udinga usizo oluthe xaxa? Hack isikhathi eside ngokwengeziwe ngokuthenga ukhiye womkhiqizo weviki elingu-1!
Iba ngomunye wabasebenzisi be-Gamepron abazinikele kakhulu nge-1-Month Product Key
Ngazo zonke izici ezimangazayo esizifakile kule PUBG Hack, kuzoba isimanga lapho umuntu ekugcineni ezokwazi ukukukhipha (okuzoba yinto engavamile, khumbula wena!).
Imininingwane ye-PUBG Rage Hack
I-PUBG Rage ibeka amandla ezandleni zakho ngokuhlanganiswa okungenamthungo kwazo zonke izici ezisetshenziswa kakhulu ze-PUBG Hack. Alikho itshe elishiywe lingaguqulwanga uma kukhulunywa ngaleli thuluzi, yingakho iningi labasebenzisi bethu beGamepron selijwayele. Lonke ithuluzi linomuzwa ohlukile, kanti nePUBG Rage Hack ayihlukile! Izindaba ezimnandi ukuthi le nkohliso ilingana nanoma iyiphi enye ozoyithola ku-Gamepron, iyenze ifanele noma ngubani ofuna ukuthola onqenqemeni ngenkathi edlala i-PUBG.
IPUBG inzima ngokwanele njengoba injalo, ngakho-ke kungani ungenzi izinto zibe lula kancane? I-PUBG Rage Hack yethu ifaka ukuthandwa kwe-Enemy ESP (Box and bone), Enemy Information, Item ESP, Aimbot, 2D Radar, nokuningi! Zonke izici zakho eziyizintandokazi zifakiwe ngaphakathi, kunezici ezengeziwe ngaphezulu.
Aim Bone scan
Hlela Ukuhlolwa Kwezimoto
Hlela Isitha sixwayise
Injongo Isitha Esingqubekile
Isidlali Esihlose Wena
Mayelana ne-PUBG Rage
Ungasebenzisa i-PUBG Rage Hack ukuphatha izitha zakho njengama-pawn ku-chessboard. Nge-Smooth Aiming ne-Bone Prioritization, alikho ithuba lokuthi uphuthelwe noma yikuphi ukuqhuma kwakho - ukungena ezimpini zezibhamu kuzoba ukuphunyuka okuphumuzayo manje! Usuvele uyazi ukuthi uzophumelela lapho i-PUBG Rage Hack yethu inikwe amandla, ikakhulukazi uma ucabanga i-2D Radar ne-Aimbot ukuthi zisebenze ndawonye ngaphandle komthungo. Phunga izitha zakho ngeRadar bese ubadubula ngokushesha! I-Automated Weapon switch nayo ikhona uma ungaphandle kwe-ammo, kanye ne-Visible Check and Fight Mode.
Kungani usebenzise iPUBG Rage ngaphezu kwabanye abahlinzeki?
Usebenzela imali yakho kanzima, ngakho-ke kungani uzihlupha ngokuyisebenzisa kuma-PUBG Hacks aswelekile? Ungahlala uthenga ama-hacks athembekile futhi asezingeni eliphakeme lapha eGamepron, yingakho kufanele uhlale uhlola nathi ngaphambi kokubheka kwenye indawo. Sinezinga eliphakeme kakhulu lokulibamba ngaphambi kokuthi kukhishwe noma yimaphi amathuluzi wethu, ngakho-ke usuyazi ukuthi uthola umkhiqizo omuhle - lapho uthenga nge-Gamepron, ukuthola ama-PUBG Hacks amahle kakhulu kuyisiqinisekiso! Umdlalo ungakhungathekisa ngokwanele, ngakho-ke ukubhekana ne-PUBG Cheat yokuntula okunzima ukusebenza nayo kuzokwenza izinto zibe zimbi kakhulu.
Imenyu engaphakathi komdlalo yanoma iyiphi i-hack enikeziwe ibaluleke ngendlela emangalisayo, yize abanye bengase bacabange. Uma isikrini sakho siminyene nemfucumfucu ungahle ukwazi ukuwina, kepha ngabe uyazijabulisa? Sinikeza imenyu ebushelelezi futhi emisha engaphakathi komdlalo eyenza ukuguqula izinketho ezithile zokugenca ku (kuvaliwe!) Kube nomoya. Ukuguqula inqubo ebalulekile yokugenca, ngoba kuzoba nezikhathi lapho kufanele udlale uyisimungulu bese uphuma ungenacala. Uma ufuna imenyu engcono kakhulu yomdlalo, i-Gamepron izokhipha njalo.
Ukukopela ngendlela ehlakaniphile futhi uthenge i-PUBG Hack yakho khona lapha ku-Gamepron!
Cha, awukwazi ukusakaza ngale nkohliso futhi izobonakala kubabukeli.
Le nkohliso ingaphandle.
Lokhu kukopela kungaphandle, okusho ukuthi kufanele udlale umdlalo ngemodi engenamngcele noma efasiteleni.
Ngenkathi abadlali abasha bezabalaza ukuqonda umdlalo futhi abanolwazi oluningi babusa kakhulu, ungangena kulo mdlalo okokuqala ngokuzethemba usebenzisa i-Rage PUBG Cheat yethu.
Ingabe ukulungele ukuzwa ukuthi kunjani ukuwina ushintsho?
Ilungele Yengamela nge-PUBG Rage Hack yethu?